Inona no tombontsoa azo avy amin'ny gorodona laminate - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tombontsoa azo avy amin'ny gorodona laminate
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny gorodona laminate
Ahitsio: Denny　2019-12-05　Mobile
1. Raha ampitahaina amin'ny gorodona vita amin'ny hazo mavesatra, lehibe ny habe.
2. Misy karazany maro ny loko, izay afaka manao simulate isan-karazany amam-borona vita amin'ny hazo voajanahary na modely amin'ny endrika voajanahary, lamina sy loko.
3. Ny fiantraikany amin'ny tany aorian'ny fametrahana dia tsara.
4. Na dia ny loko sy ny fomba fijery tsara.
5. Raha ampitahaina amin'ny gorodona hazo matevina dia manana fanoherana avo amin'ny haingam-pandeha, ny famonosana ny lelafo avo kokoa, ny fanoherana ny fahalotoana sy ny haintany, ary ny fampihenana tsara sy ny fanoherana fiatraikany.
6, mora diovina, fikarakarana ary fikojakojana tsotra.
7. Ny elanelam-pandrefesana tsara, ny fanonganana tanteraka ny rafitry ny hazo tany am-boalohany, mamotika ny toetra mampiavaka ny anisotropy sy ny famafazana ary ny fampihenana, dia ahafahana miantoka izany fa ny elanelana misy eo amin'ny gorodona dia kely mandritra ny fampiasana ary tsy mora hitrandraka. Tena ilaina ho an'ny efitrano misy rafi-panafahana ambany.
8. Fametrahana mora sy fametrahana mora.
9, ny vidiny dia mora kokoa.
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny gorodona laminate Ny atiny mifandraika
Inona no tsy mampitovy ny gorodona hazo matevina sosona sy ny gorodona hazo matevina misy sosona telo sosona
Momba ny sosona ambonin'ny tany (1) Fahasamihafana matevina Ny sosona vita amin'ny hazo matevina telo-sosona dia telo santimetatra ny savaivony, ary ny sakeliny marobe dia 0.6-1,5 milimetatra ny hate...
Inona avy no mampiavaka ny gorodona pvc?
Ny singa tena amin'ny gorodona PVC dia polyvinyl klorida, ary avy eo ny singa hafa dia ampidirina hanatsarana ny fanoherana ny hafanana, ny fahatsapana sy ny haingony. Ny gorodona PVC dia karazana pl...
Inona no tsy mampitovy ny gorodona vita amin'ny plastika sy ny valin'ny PVC
Betsaka ny olona ankehitriny miantso ny gorodona valizy PVC plastika. Ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Yiwu Henggu Floor dia hanome anao ny siansa malaza. Raha ny marina, ny gorodona plastika amin'n...
Inona no gorodona PVC sy ny fomba hisafidianana gorodona PVC?
Inona ny gorodona PVC Araka ny firafitra, ny gorodona PVC dia mizara ho telo karazana: karazana mampitambatra maro karazana, homamiadana amin'ny alàlan'ny fo ary karazana semi-homogeneous. 1. gorodon...
Fa inona ny gorobona vita amin'ny bosoa ary misy karazany maro?
Gorodona: Cork no arovana miaro ny oak sinoa, izany hoe hoditra, izay matetika fantatra amin'ny hazo oaka. Ny hatevin'ny bosoa dia amin'ny ankapobeny dia 4 mm mm, ary ny kisoa avo lenta dia mety haha...
Inona no haben'ny hazo vita amin'ny ankapobeny?
Gorodona vy voritra avo
Ahoana no mitazona ny gorodona vita amin'ny hazo